थाहा खबर: विवादकै बीच बजेट पास गर्ने सुप सरकारको तयारी
विवादकै बीच बजेट पास गर्ने सुप सरकारको तयारी
धनगढी : तीव्र विवादकै बीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट पास गर्ने तयारी थालेको छ। प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले असार १ गते प्रदेश सभामा पेश गरेको बजेट भोलि (आइतबार) पास गर्ने तयारी थालेका हुन।
आइतबार दिउँसो २ बजेको प्रदेश सभाबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷८९ को बजेट पास गर्ने तयारी रहेको अर्थ मन्त्री शाहले जानकारी दिए। उनले भने,‘बजेटको बारेमा सदनमा माननीय ज्यूहरुका सुझावहरु, भनाइहरु राख्ने काम जारी छ। सम्भवतः भोलि, प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको वार्षिक राजश्वको अनुमान र व्यय सम्बन्धी जुन प्रस्ताव छ, त्यो पारित हुन्छ होला।
केही माननीय ज्यूहरु भोलि पनि सुझाव दिनुहुन्छ, धारणा राख्नु हुन्छ। त्यसपछि अर्थ मन्त्रीको हैसियतले मैले जवाफ दिने होला। सम्बन्धित मन्त्रीहरुले पनि जवाफ दिनु होला।’ प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले गैरकानूनी रुपमा बजेट ल्याएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् भने नेकपा एमालेकै प्रदेश सभा सदस्यहरु पनि व्यक्ति तथा कम्पनीहरुलाई गैरकानूनी रुपमा बजेट वितरण गरेको भन्दै विरोधमा छन्।
विविध कुराहरु रहन्छन् बजेटमा। अनियमितता छ भने हामी अनुगमन गर्छाै, छानबिन गर्छाै। त्यस्ता आयोजनाहरु रोक्छौ भनेकै छौ। प्राविधिक त्रुटि भएका विषय पनि सच्याउछाैं भनेकै छाैं। गत विगतको बजेट आउने बेला चर्काे विरोध हुन्थ्यो। यो हुने गर्छ हाम्रो प्रदेशमा। अन्यमा पनि यस्तै हो। छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको छ,’ उनले भने।
प्रदेश सभामा मिश्रित प्रतिकृया आएका थिए। सत्ता पक्षका केहि प्रदेश सभा सदस्यहरुले बजेट राम्रो आएको बताएका थिए। तर, नेकपा एमाले (ओली) समूहका प्रदेश सभा सदस्यहरुले भने चर्काे विरोध गर्दै आएका छन्।
मन्त्री शाह भने मन्त्रीहरुबीच मनमुटाव नभएको दाबी गर्छन्। उनले भने, ‘पहिला मन्त्रालयहरुलाई सिलिङ दियौँ। अर्थ मन्त्रालयले वैशाखमा सिलिङ पठाएको हो। मुख्यमन्त्री ज्यूले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको थियो। पछि जेठको २५/२६ गतेतिर संशोधित बजेटको अनुमान गर्यौ। सिलिङ दिंदाको र पछिको अवस्था नै भिन्न हुन्छ। खर्चको अवस्था के हुन्छ ? कार्यान्वयन कसरी कसरी हुन्छ ? हाम्रा स्रोतहरुको अवस्था के रहन्छ ? अनुदानको स्थिति के रहन्छ ? आन्तरिक आयको स्थिति के रहन्छ ? यी सबै कुरा हेरेर हामीले संशोधित अनुमान गर्छाैँ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जुन प्रस्तुत गर्यौ, त्यसमा केही सिलिङ बढाएर पनि मन्त्री ज्यूहरुले कार्यक्रमहरु राख्नु भएको थियो। भौतिकले पनि राख्या थ्यो। सामाजिकले, पर्यटनले, आन्तरिक मामिलाले सबै मन्त्रालयले, कृषि बाहेक सबैले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। सकेसम्म सम्बोधन गर्ने हामीले प्रयास गरेका छौ।’
कर्णाली नदीमाथिकाे पुल भासियाे, आवात–जावतमा रोक